ပန်ဒိုရာ: ပိုပို မိုမို ဂိုဂို
Posted by pandora at 12:58 AM
၂ ကောင်လုံး အမဖြစ်နေပီး လေဥဥကြတယ် ထင်ပါ့..
ကဗျာဆရာရဲ့ ညီမဆိုတော့ ဘဲကို နာမည်ပေးတာတောင် ပိုပို မိုမို ဂိုဂိုတဲ့။ သူ့အစ်မကလောင်နာမည်တောင် သူရွေးပေးသလားပဲ။ ဒိုဒို ဆိုတော့...။
ငန်းဥက အထဲမှာ ဘဲဥတို့ ကြက်ဥတို့လို မဟုတ်ဘဲ အဝါရောင် ၂ ခု ပါတာ တော့ သိတယ်.. ဒါ့ကြောင့် ၂ဆ တိုးတာ ထင်တယ် :)
ဘဲငန်းတော့ တခါမှ မမွေးဖူးဘူး။ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဆက်ပါအုံး..
ဈေးက နစ်လုံးဝယ်ထည့်ထားတာ. ပန်ဒိုရာပေါ့
ပန်ပန်က သုံးရက်မှာ ဘဲငန်းဥ လေးလုံးတွေ့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ရေးလက်စကို တခန်းရပ်လိုက်တော့ အားလုံး စဉ်းစားစရာလေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့...
အမသက်ဝေ ဒေါ်ပန်က စကားပြောတင်မဟုတ် စာရေးတာပါ ဟိုလိုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တာ သိတယ်ဟုတ်...
မီးလာတဲ့ညနဲ့ ကြုံပြီး နေ့လို့မှတ်ကာ ဘဲငန်းက တရက်နှစ်ခါဥလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. ဇာတ်လမ်းရပ်ပုံကလည်း အကယ့်ပွိုင့်ရောက်မှ..း))).. မြန်မြန်ဆက်ပါဗျို့...
၂ ခါ ဥ ၄ လုံးလားမှမသိတာ ဒေါ်လေး ရး) ဘဲဥ ဇတ်လမ်းများ အခုချိန် ဘလော့ဂါများ အပိုင်းဆက်ရေးတာ ခေတ်စားနေပါတယ်ဗျာ ။
ဘဲငန်း ၂ကောင်(အထီးချည်းပဲ) မွေးဖူးလို့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်.... မမ
အမရာ ကောင်းခန်းရောက်မှ ဆက်ရန်တဲ့ ရက်စက်လိုက်တာ....
ညဖက်မှာ ဘဲခြံကို ဘိုးဘိုးအောင်အလည်ရောက်လာတာဖြစ်မယ်၊ နှစ်ဆတိုးသွားတယ်။
ဘယ့်နှယ် သုံးရက်မှာ လေးလုံးဖြစ်နေရပါလိမ့်??? သိချင်လှပြီ...
ပန်ပန်ရေ...ရေးဟန်တမျိုးလေးနော်...။ အဲလို ဘဲပုံတို့...ပုရွက်ဆိတ်ပုံတို့ ဆွဲတတ်ချင်တယ်... သင်ပေးပါလားဟင်...တို့တွေ တီကောင်က စလိုက်ကြရအောင်လေ....:P
ပိုပို မိုမို ဂိုဂို ............လို့ ဆိုထားမှတော့။
ပြီးတော့ သူတို့က လျှောက်သွားတယ် ဆိုတော့...
သူတို့နဲ့ အတူ နောက်ထပ် အမတစ်ကောင်က ရောက်လာပြီး ဥကျင်းထဲမှာ ဝပ်ပြီး ဥသွားတာပဲ ဖြစ်မယ်။ အဖော်ရအောင်လို့ ဆိုထားတဲ့ အတွက် နောက်တစ်ကောင်ကို အထီးလို့ပဲ ယူဆမှ ရမယ်လေ။
ဒါကြောင့် သူတို့ လျှောက်သွားရင် သိလာတဲ့ နောက်တစ်ကောင် “ ဂိုဂို ” က ဥတာပဲ ဖြစ်မယ်။
( ကိုဇော် ရမ်းတုပ်သည်။ )
ရေဘဝဲပေါလ် ဆိုပြီး ဖေ့ဘွတ်ခ် ထဲတွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ မပန်ဒိုရာရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ပထမဆုံး ရောက်လာပါတယ် ပိုပို မိုမို ဂိုဂို ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးက တိရိစ္ဆာန် ချစ်တတ်သူ ကျွန်တော့်ကို စွဲဆောင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်း အဆက် လေးကို စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု့နေပါ့မယ်....။
မပန်ရဲ့ ဘဲငန်းပုံလေးကြိုက်တယ်...။ ငန်းဥပုံပြင်လေးဆက်စောင့်နေမယ်..။
ညီမလေး ရွှန်းမီ ပထမဆုံးလာဖြေပြီး မှန်ပါတယ်ကွယ်။
ကျန်သူများလည်း ဆက်လက်အားပေးကြပါဦး။ ပန်ဒိုရာရဲ့ ထင်ရာမြင်ရာ ပုံဆွဲနည်းတွေကိုလည်း ကြုံရင် တင်ပေးသွားပါမယ်။
ကိုဇော် ပြောတာ ဂိုဂိုက ဥတာ ဖြစ်မယ် တဲ့ ဟားဟားဟား
အပိုင်း ၂ ဖတ်ပြီးမှ ထပ်လာဖတ်သူ